Yenziwe ngekhwalithi ephezulu ye-quartz futhi yenziwa ngobuchwepheshe besimanje bokucubungula i-ceramic.
Isetshenziselwa ikakhulukazi ukushisa okuphezulu okuncibilika ama-alloys afana nama-alloys neplatinamu, enokumelana nokushisa okuphezulu okungaphezu kwama-degree angu-2000.
Ingaphakathi elizungezile elingaphansi kwesitsha kulula ukulikhipha ngokuphelele, ithuluzi elisebenzayo lokuncibilikisa igolide nesiliva.
I-silica crucible Heat Resistance Fused Silica Quartz Ceramic Crucible
1.Izinto ezibonakalayo: ukwakheka okuningi yi-SiO2 ( ≥ 80%), Al2O3 (≤17%) kanti enye ingu-3%( K2O,Na2O,Fe2O3) .
2.Isicelo: isetshenziselwa iplatinamu, igolide, nokunye ukuncibilika kwengxubevange yokushisa okuphezulu.
3.Ubulukhuni obuphezulu, futhi ukumelana nengcindezi ngu≥70MPa.
I-4.Ukumelana nokushisa okuphezulu okushisayo, i-coefficient ephansi yokwandisa, ukuzinza okukhulu kokushisa.
5.Izinga lokushisa lokusebenza ngu-1350 ° C, izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza ngu-1600 ° C.
I-6.Impilo yesevisi ende, ifaneleka ngokukhethekile ukushaqeka okushisayo.
Izici ze-Quatrz crucbile Product
I-Anti-strong acid kanye ne-alcali eqinile
Akukho crack eve ngemva kwekhulu ukushisa kungazelelwe kanye namakhaza kungazelelwe
I-Quartz Ceramic Crucible Technique Index:
Into Iyunithi Inkomba
Ukuminyana kwenqwaba g/cm3 1.80-1.90
Amandla Acindezelayo I-MPA ≥50
I-Coefficient of Thermal Expansion ×10-6/℃ ≤0.6
Izinga lokushisa lesikhathi eside (℃) 1100
Izinga lokushisa eliphezulu (℃) 1650
isici I-quartz Ceramic crucible ehlanganisiwe enesakhiwo esihle, i-thermal conductivity ephansi, i-coefficient ephansi yokwandisa okushisayo, ukunemba okuphezulu kwe-dimensional, izinga lokushisa eliphezulu elingaguquki, ukumelana nokushaqeka okuhle kokushisa, izakhiwo ezinhle zikagesi kanye nokumelana okuhle kokuguguleka kwamakhemikhali njll.
Isicelo isetshenziswa kabanzi embonini yokucubungula ingilazi ejulile, imboni ye-metallurgy, imboni ye-elekthronikhi, imboni yamakhemikhali, i-aerospace kanye neminye imikhakha.
Isicelo semikhiqizo yobumba ehlobene ne-quartz isitini sesango esithandweni sengilazi esintantayo, isembozo somgijimi, i-roller engenalutho yesithando somlilo sengilazi entantayo, i-quartz glass ceramic roller yesithando somlilo esivundlile, umlomo wamanzi wensimbi ecijile, insimbi yensimbi kanye nesithando somlilo sokushisa esine-roller engenalutho, umlomo wamanzi wengilazi, i-punch, i-crucible, umzimba wesithando somlilo, isibabule, nesilinda, ibha yokugubha, umcengezi, ithubhu elijikelezayo, umnyango we-oven coke njll. Ngaphezu kwalokho, ku-missile, rocket, i-radar nezinye izici nazo zinenani elincane lezicelo.
* Ukumelana nokushisa okuphezulu, akukho ukuqhekeka
* Ukumelana okuhle kwe-thermal chock
* Excellent conductivity ezishisayo
* Ukuhlanzeka okuphezulu nempilo ende yenkonzo
I-silica crucible ehlanganisiwe yochwepheshe ikhiqizwa e-china
I-silica encibilikayo crucible ehlanganisiwe